Christie Agatha. Mafirimu ake akakurumbira ... Zvazvino Zvinyorwa
Christie Agatha. Mafirimu ake akakurumbira
Iyo itsva firimu vhezheni ye Kuuraya paMabvazuva Express, imwe yenhau dzinozivikanwa dze Agatha Christie. Yakatungamirwa uye yakatarisana neBritish Kenneth brannagh, iyo inochengetera basa re Hercule Poirot, inounza pamwechete yakasarudzika cast, seimwe ye Sidney Lumet muna 1974. Asi mafirimu anoenderana nemanyorerwo nemunyori akawandisa sebasa rake rakakura. Ini ndinoongorora zvimwe zvinonyanya kuzivikanwa. Ini pachangu ndichagara ndichigara na masterful Chapupu chemuchuchisi.
1 MHURA PAMUSORO PENYAYA (SIDNEY LUMET, 1974)
2 RUFU PANOTAURWA (JOHN GUILLERMIN, 1978)
3 CHINONYANYA KUPONESWA (GUY HAMILTON, 1980)
4 RUFU PASI PEZUVA (GUY HAMILTON, 1982)
5 CHIDZIDZO PA4: 50 (GEORGE POLLOCK, 1961)
6 GUMI NEGRITOS (RENÉ CLAIR, 1945)
7 CHAPUPU CHINzvimbo (BILLY WILDER, 1957)
PONDERA PAMUSORO PEKUTAURA (SIDNEY LUMET, 1974)
Yaive yekutanga vhezheni uye director aiziva nzira yekushandura yaChristie inovaraidza kuve yechinyakare pakarepo kutenda, muchidimbu, kune a wakanaka kwazvo pakati pavo paive nemaBritish Albert finney saPoirot, Ingrid BergmanLauren Bacall Sean Connery, Anthony Perkins kana Jacqueline Bisset.
Akaunti nyaya ichaferefetwa naPoirot paunodzoka kumba kubva kubasa rakabudirira. Anofanira kutora chitima chengano Orient Express uye masimba makuru echando anomisa kumira kusingatarisirwe. Mangwanani akatevera mamioneire anowanikwa akabayiwa uye munhu wese akamukomberedza anoita kunge anoda kuratidza kuti haana mhosva. Uye zvakanaka, isu tatoziva kuti mugumo chii, handiti?
RUFU RWARwizi (JOHN GUILLERMIN, 1978)
Makore mana mushure Kuuraya paMabvazuva Express kubva kuLumet kwakauya izvi Rufu paNire. Ino nguva irowo mutambi weBritish uye ane mukurumbira Peter Ustinov uyo rinosanganisa Poirot. Wekutanga anga ari Charles Laughton, asi aive Ustinov uyo akakwanisa kubatanidza kumeso kwake kuruzhinji nemutikitivha weBelgian akangwara. Yakazviita katanhatu.
Uku kuchinjika zvakare kwaive nekisiti izere nenyeredzi mavanga vari Bette Davis, Mia Farrow, David Niven, Angela Lansbury, Jane Birkin, George Kennedy, Jack Warden naMaggie Smith. Zvinoda kuziva kuti Ustinov akange akaroora hanzvadzi yaAngel Lansbury, mutambi wemitambo uyo akaonekwa mune mamwe maitiro emabasa aChristie. Uye makore mashoma gare gare Lansbury aive protagonist weakakurumbira terevhizheni akateedzana Chanyora mhosva, ane hunhu hukuru hwakavakirwa kuna Miss Marple.
Mune ino kesi Hercule Poirot famba upinde muKarnak, igwa rerwizi rwoumbozha runoyambuka rwizi rwaNire. Mukati maro mupfumi wenhaka anourawa. Asati asvika pachiteshi, anofanirwa kubvisa alibis evamwe vaaifamba navo kuti atsvage mhondi. Nharo yakafanana chaizvo inongochinja mamiriro uye nzira dzekufambisa.
Kubva mune ino bhaisikopo zvakare vhidhiyo itsva vhezheni ichangobva kuziviswa kutora mukana wekudhonza kweiyi yekupedzisira ye Kuuraya paMabvazuva Express.
CHIMANGWA CHAKAPUTSIKA (GUY HAMILTON, 1980)
Heino muenzaniso wekutora chikamu kwe Angela Lansbury achiridza Miss Marple. Yakave zvakare yakatumirwa neyekushamisa nyeredzi kunyangwe hazvo yanga ichiderera, se Dombo Hudson, Elizabeth Taylor o Tony Curtis. Vashandi veHollywood vanosvika mudhorobha rakanyarara reChirungu kuzopfura bhaisikopo renguva. Kana imwe yenhengo dzayo yaiswa chepfu, Miss Marple vanoona nezvekuongorora zvakaitika.
RUFU PASI PEZUVA (GUY HAMILTON, 1982)
Peter Ustinov akadzokorora basa saPoirot mune ino firimu. Iye zvino chiito chave pa hotera yeBalkan (yakadzokororwa muMallorca). Poirot achakurumidza kuziva kuti vashanyi vepamusoro vanogoverana ruvengo rwakadzama naArlena, mutambi. Kana izvi zvikaurayiwa, vese vanodzoka kuva vanofungidzirwa nezvikonzero zvavo zvekumuuraya.
CHIDZIDZO CHA4: 50 AM (GEORGE POLLOCK, 1961)
Isu tinodzokera kumashure munguva neichi chinjaidzo yaive yekutanga kudhiraivha kwemutungamiriri George Pollock uye mutambi Margaret Rutherford. Vakaburitswa vachigadzirisa nyaya yaMiss Marple asi vachidzidzisa mabheseni emamwe ese mabasa: zvipfeko, kuseka uye vavengi mumumvuri.
Margaret Rutherford ndiye aive akakurumbira kumeso mumufirimu waMiss Marple, waakatamba kana. Munyaya iyi ndizvo Miss Marple ivo pachavo, vari parwendo rwechitima, chapupu chinopfupika kumhondi akazvipira mumotokari yechitima chakafanana. Asi hapana chitunha uye zviremera zvichatenda kuti zvinongova fungidziro dzechembere inofarira enhau dzevatikitivha. Saka anozofunga kuferefeta ega.
GUMI NEGRITOS (RENE CLAIR, 1945)
Yakanyorwa muna 1939 yaive rimwe remabhuku akajeka uye anotengesa zvakanyanya kubva kuna Christie uye inoramba iri imwe yevakakurumbira uye vane mukurumbira. Iyo zvakare ndeimwe yeakanyanya kugadziriswa. Iyi ndeimwe yevakuru vakuru uye yakatungamirwa neveFrance René clair. Zvizhinji gare gare mu1987 aive neRussia vhezheni iyo zvakare inoremekedza zvikuru iyo yekutanga novel.
Vanhu gumi vasina hukama vanosangana pachitsuwa chisinganzwisisike chiri pamhenderekedzo yeChirungu nemumwe VaOwen. Uyu ndiye muridzi weimba yepamusoro, asi vaenzi vake havamuzive. Mushure mekudya kwemanheru kwekutanga, uye vasina kumboona muenzi wavo zvakadaro, vanodya gumi vanopomerwa nekunyora kuti vakapara mhosva. Mumwe nemumwe, kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, vanourawa pasina chikonzero chiri pachena kana tsananguro.
CHINANGWA CHAPUPU (BILLY WILDER, 1957)
Izvo zvinoenderana nekutamba naChristie wezita rimwe chete. Uye Billy Wilder akabudirira nefirimu yake inoenderana nemitambo ye Tyrone Simba, Marlene Dietrich uye kunyanya Charles Laughton, basa reunyanzvi hweunyanzvi hwechinomwe. Anotaura nyaya ya Leonard vole (Simba). Vole murume akanaka uye ane hushamwari, ndiani akapomerwa mhosva yekupondwa kwemukadzi akapfuma uyo akamusiya ave mugari wenhaka yepfuma zhinji.
Humbowo hunhu pamusoro pake hwakajeka, asi eGweta rine mukurumbira wematsotsi Sir Wilfrid Robarts (Kuseka) anotenda kuti haana mhosva uye anobvuma kumurwira nenzira dzose. Vole akaroora mukoti wechiGerman (Dietrich) uyo waakasangana naye panguva yehondo, uye iye anowana maari chapupu chakanyanya kushora.
Iyo bhaisikopo akawana mazita matanhatu eOscarBest Movie, Best Director, Best Leading Actor (Charles Laughton), Best Supporting Actress (Elsa Lanchester), Best Sound, uye Best Editing, asi vakatadza kuwana chero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Christie Agatha. Mafirimu ake akakurumbira